दाँत र गिजाजन्य रोगबाट सहजै पार पाउन सकिने प्राक्रितिक घरेलु उपचार - Nepal News - Latest News from Nepal
अमेरिकनहरु अत्यधिक चिल्लो र चिनी जन्य एसिड युक्त खानेकुरा खोने गर्छन् । यो उनीहरुको बानी नै हो । यस्तो खानालाई स्वस्थकर मानिदैन किनकि यस्ता खानाले हाम्रो हड्डी र दाँतलाई आवश्यक पर्ने मिनरल उपलब्ध गराउन सक्दैन ।
चिल्लो तथा चिनीजन्य खानाले शरीरलाई सुनाउने तथा मोटो पार्ने काम गर्छ । तर अमेरिकनहरुले सेवनगर्ने खानेकुरामा प्राक्रितिक रुपमा पाइने चिल्लो पदार्थ हुने होइन । तसर्थ यस्ता चिल्लो पदार्थहरु मानव शरीरका लागि विषादी जन्य मानिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रायजसो अमेरिकनहरु चिल्लो र गुलियो अत्यधिक खाने गर्छन् ।
आज हामी मुखलाई स्वस्थकर बनाईराख्न खानै नहुने खानेकुराका बारेमा जानकारी गराउँदै छौं :
१. रिफाइन गरिएका खानेकुरा
३. एसिड युक्त खानेकुरा
४. पाकेटका खानेकुरा
सधैजसो आफ्नो डाइटमा हरियो साजसब्जी धेरै प्रयोग गर्नुहोस् । यसले रोगबेथा लाग्न दिदैन । खैरो जैबिक चामल, टुसा पलाएका गेडागुडी, हरियो सागसब्जीको प्रयोग स्वास्थका लागि राम्रो हुन्छ । जैबिक तर कांचो, ताजा खानेकुरा सबै भन्दा राम्रो मानिन्छ ।
पेट कमजोर हुनेहरुको कहिल्यै पनि दाँत स्वस्थ हुन सक्दैन
हाम्रो पेट तथा आन्द्रा हो जहाँबाट मानव शरीर स्वस्थ हुन संभव छ । तसर्थ तल दिइएको सल्लाह पालन गर्नुभई मुखजन्य समस्याबाट छुटकारा पाउनुहोस् ।
१. चुरोट सेवन बन्द गर्नुहोस्
चुरोट तथा गाँजा सेवन गर्नाले मुखको स्वास्थ बिगरिन्छ । चुरोट सेवन थोरै गरे पनि यसले मुखजन्य समस्याहरु पुर्ण रुपमा निको हुन दिदैन ।
२. दैनिक रुपमा र उचित तरिकाले फ्लस तथा कुल्ला गर्नुहोस
तपाईको फ्लस गर्ने बानी छ होला तर हुनसक्छ तपाईको फ्लस गर्ने तरिका उचित छैन। गिजा सुनिने तथा दाँतमा समस्या छ भने फ्लस अति आवश्यक छ किनकि यसले तपाईको दाँतमा अडकिएको खानाको टुक्रालाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ जसका कारण तपाईको दाँतमा बाकटेरियाले घर बनाउन सक्तैन ।
३. आफ्नै टुथपेस्ट तयार पार्नुहोस्
टुथपेस्ट तयार पार्ने बिध र सरदाम
( नरिवलको तेल र बेकिङ सोडा बराबर मात्रामा)
यदि तपाई ६ चम्चा नरिवलको तेल लिदै हुनुहुन्छ भने, त्यतिकै मात्रामा बेकिङ सोडापनि लिनुहोस् । १०९१५ थोपा खाने तेल । ल्वाङ, कागती, सुन्तला, दालचिनी, पुदिना मध्य टुथपेस्टको स्वाद राम्रो पार्न जे प्रयोग गरेपनि हुन्छ ।
तेलले कुल्ला गर्ने
मुखजन्य समस्याबाट छुटकारा पाउन यो आयुर्वेदिक उपचार पद्धती अति लाभदायक छ । यसका लागि तपाईले नरिवलको तेल, दालचिनिको तेल, ल्वाङको तेल, पुदिनाको तेल मध्य जुनै तेल भएपनि मुखमा खन्याउनुहोस् र करिव १५९२० मिनेट सम्म मुख बन्द गरेर राख्नुहोस् । अव पानीले मुख कुल्ला गरे जस्तै गरि बिस्तारै कुल्ला गर्नुहोस् । मुख भित्र बारम्बार कुलकुल गर्नुहोस् ।
अव तेललाई थुक्नुहोस् ।
यो बिधि अपनाउनाले दाँत, गिजा लगायत मुख संबन्धी कुनै पनि रोग आपसे आप हराएर जान्छ । मुख सफा रहनु भनेको शरीरनै स्वस्थ रहनु भन्ने बुझिन्छ ।
एउटै माउले जन्मायो पाँच पाठापाठी